နွေ ဦး ရာသီအတွက် Massimo Dutti ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Bezzia
ကြားနေအရောင်များသည် SS21 စုဆောင်းမှုအသစ်၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည် Massimo Dutti ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ အဖြူ၊ ကုန်ကြမ်း၊ မုန့်၊ မီးခိုးရောင်နှင့်အမည်းရောင်တို့သည်စုဆောင်းမှုအသစ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသူတို့၏စုံလင်မှုကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်စုံများကိုဖြည့်စွက်ရန်စုံလင်သောမဟာမိတ်များ၏အပိုင်းအစများကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီ - နွေရာသီအတွက် Massimo Dutti ၏အဆိုပြုချက်အသစ်များကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်။ ပုံစံ၏ပုံစံနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တိကျသောအဆိုပြုချက်များ၊ ပိုပြီးပေါ့ပေါ့အပိုင်းပိုင်း.
Massimo Dutti သည်မူလအရ၎င်းကိုလိုအပ်သောအသစ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားသည့်ထိုအနှစ်သာရအားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ဖိနပ်များနှင့်အိတ်များစုဆောင်းမှုအသစ်တွင်သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားနိုင်သည် အားကစားစတိုင်အပိုင်းပိုင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးနှစ်သိမ့်နှင့်အတူပေးနိုင်သောသူတို့။
အဲဒီအားကစားအပိုင်းတွေထဲမှာငါတို့တွေ့ခဲ့တာကိုပြောခဲ့တယ် ပေါင်းစပ်သားရေဖိနပ် kaki သို့မဟုတ် beige အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်အဖုံး။ သူလည်း moccasin ဖိနပ် ရာဘာဖိနပ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်တစ်နေ့တာနှင့်တစ်နေ့တာကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သာမန်ဂန္တ ၀ င်မုန့်များကိုသာကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုယခုအသစ်သောစုဆောင်းမှုတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ သားရေ၊ အ ၀ တ်အစားများနှင့်စုဆောင်းထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့ကိုအရာအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အစောပိုင်းနွေ ဦး ရာသီ၌ဖိနပ်များနှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်များကို ဆက်လက်၍ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိမ့်မည်။ Massimo Dutti သည်ဂန္ထဝင်အမှတ်တရများကိုမမေ့ပါ။ အနက်ရောင်ဖြင့်စတုရန်းခြေချောင်းသားရေခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်ကိုပေးသည်။ အဖြစ်မှန်၌ဤစုဆောင်းမှုအသစ်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သောခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်သည်သဲရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ချွတ် cordoned နှင့်လမ်းကြောင်းကြမ်းပြင်နှင့်အတူ.
El nappa တုတ်အိတ် နှင့်၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာငါတို့အဝတ်အစားကိုဖြည့်စွက်ရန်စံပြကြောင့်, တရားစွဲ။ သင်သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုခုအတွက်အခြေချလျှင်သင်သူတို့၏အိတ်များထဲမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီအိတ်တွေထဲကိုလွဲသွားတာတစ်ခုကအိတ်ဆောင်တွေ၊ အသက်ကြီးသူများပင်အဓိကအခန်းတစ်ခုသာရှိသည်။
Massimo Dutti ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်ကိုသင်ကြိုက်သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » လက်ကိုင်အိတ်များ » နွေ ဦး ရာသီအတွက် Massimo Dutti ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ